Ejighị n'aka dị ka ma i nwere ike na iwu ịzụta na-eji Kratom akwukwo na ngwaahịa na Michican ma ọ bụ obodo Detroit? Ugbu a, na abụọ nke 50 U.S. States-amachibido iji ihe Kratom, ọ bụ ezie na ndị ọzọ na-ekwu nwere ike ịmalite na-esonụ uwe na afọ ole na ole. Michigan ka mgbe e mara dị ka na-atụ-eche echiche ma ọ na akara na nke a echiche na Kratom tii herbal usọbọ anọgide iwu n'ihi na ndị bi nke steeti a. Nke a ethnobotanical nwere a elu ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na steeti na isi na-aga n'ihu na-eto eto dị ka ndị mmadụ n'otu n'otu na inyocha na uru nke Mitragyna Speciosa maka ọnọdụ, ike etoju ma na alleviating nchegbu.
Michigan Iwu Ọnọdụ nke Kratom
Michigan mara maka akwado nnọọ banyere bụla ọhụrụ na-elekọta mmadụ nke mara na US nakwa dị ka n'ihe banyere nnwere onwe. Kratom ka uru site a nke oge a n'ọnọdụ na bụ ugbu a iwu na steeti. A otutu Michigan natives ịghọta uru nke a ogwu, sitere na site n'ịkwụsị mgbu, boosting dịghịzi ọrụ, amụba ịta, n'ịgwọ nchegbu, na ime ntụrụndụ. Ọbụna ndị nwere ma enweta n'ime uru nke ogwu ka na-akwado ndị e ogwu dị ka a ike ọzọ.
Ụkpụrụ na Iwu
Ọ bụ ihe ijuanya mere na-ekwu dị ka Michigan ito ojiji nke Kratom. Ihe niile i nwere ime bụ anya na ogwu si nwapụtaworo na egwu ihe ndekọ ya ala mpaghara. Ruo ọtụtụ narị afọ, ogwu e ji mee ihe dị ka a nkịtị, ndị mpako usọbọ ke Ndịda Ọwụwa Anyanwụ Eshia, na nzuzo a na-aghọ esiwanye igbasa mba ndị ọzọ gburugburu ụwa. Anyị nwere ike n'enweghị na-ekwu na ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa na-ikwesị ntụkwasị obi na-eji Kratom maka ya ike uru. The ihe ọma banyere nke a bụ na ọ dịghị onye nwere ma na-ekwu na-emerụ mmetụta site na iji ogwu.
Lee ụfọdụ àgwà ndị na-ugbu a na-eme ka Kratom achọzi iwu na Michigan:
• Ọ bụ ndị na-abụghị awu: O yiri anyị nwere ike comfortably gosiri na Kratom si na-abụghị awu ọdịdị n'ihi na e nwere ma na-ọ bụla akwukwo akụkọ nke na-egbu egbu Jeremaya ma ọ bụ oké mmetụta dị ka anyị na-enweta mgbe anyị na-eji mmadụ mere ọgwụ.
• Ọ bụ ndị na-abụghị hallucinogenic: The botanical e mara imebi mgbe agakwaghị arụ ọrụ mgbe e ji n'ime mma doses.
• Ọ dịghị ihe siri ike ndọrọ ego mgbaàmà: N'adịghị ka a otutu narcotic ọgwụ ọjọọ na opiates, kratom adịghị ihe ọ bụla ọkpụrụkpụ ịkwụsị ịṅụ na-adịghị-atụle ga-ihe na-eri ahụ umi
Ịzụ Kratom ntụ ntụ ke Head ulo
Michigan bi-karịsịa ndị na Detroit-nwere ike inwe ohere Kratom site na ihe a maara dị ka anwụrụ ọkụ ụlọ ahịa ma ọ bụ site tobacconists ndị mgbe ụfọdụ na-ere ọzọ herbs na ha na-echekwa. Ọ bụ ezie na ndị a na ụlọ ahịa pụrụ ikere òkè dị mkpa site n'ịkwado ndị na-eji ọzọ na ngwaahịa, ha ka na-abụghị ebe kasị mma na-Kratom. Nke a bụ n'ihi na ndị a na-echekwa nwere ndị ọzọ yiri nkata na-enwe nchegbu na, nke putara na ha ga-eleghị anya na-ebu naanị ole na ole na ngwaahịa na ihe dị oké ọnụ price ekpuchi ha na-efefe n'elu-akwụ ụgwọ. Ọzọkwa, mgbe na-echekwa na-ebu ewere packaged nsụgharị nke Kratom, ọ bụ eleghị anya abụghị ezigbo Kratom si Asia. Ya mere, ma ọ bụrụ na ị chọrọ elu àgwà herbals, ọ bụ ihe kacha mma iji nweta ya isi n'ebe ọzọ karịa gị obodo isi ụlọ ahịa ezie a na-echekwa nwere ike na iwu-enye ya.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ndị kasị mma dịgasị iche iche nke ezigbo Kratom, mkpa ka ị zụọ ya n'aka ihe online ere onye nwere ezi rapport na ndị ọrụ ugbo na nwere ezi track ndekọ na obodo. Otu na saịtị nwere oké aha na nwere na-aga n'ihu mma reviews bụ Arena Ethnobotanicals, ihe herbal ụlọ ọrụ na-enye Kratom ngwaahịa kpọmkwem dị si Ndịda Ebe Ọwụwa Asian ugbo. Nke ahụ ụzọ, ị ga-enwe ike mara ebe herbal epupụta na-abịa site otú ị pụrụ maa mara ihe nje nke kratom ọ bụ na ihe ụdị mmetụta anya n'ihi na site na nje. Ọ bụghị naanị na ị ga-aghọta na elu mma ngwaahịa, ị ga-aghọta na ala ahịa karịa ndị dị na Michigan na-echekwa.
A Detroit based company will be hitting the market soon. Local sellers of the product are already being lined up before they even have they’re product ready.
Michigan actually has a bill pending to add kratom as a schedule 5 drug. The hearing was adjourned until March 8 2016
Nkwado Usoro * 2+5=?